अब महिनावारी हुँदा घरमा बस्न पर्दैन, विद्यालयमै उपलब्ध हुन्छ सेनेटरी प्याड ! - अब महिनावारी हुँदा घरमा बस्न पर्दैन, विद्यालयमै उपलब्ध हुन्छ सेनेटरी प्याड !
अब महिनावारी हुँदा घरमा बस्न पर्दैन, विद्यालयमै उपलब्ध हुन्छ सेनेटरी प्याड !
२०७५, २6 भदौ, 08:49:51 AM
सुत्केरी पछि तीन पटक स्वास्थ्य जाँच गर्न स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने महिलालाई समेत प्रोत्साहनस्वरुप नगरपालिकाले रु तीन सयका दरले रकम उपलब्ध गराउनाका साथै पाठेघर खसेका महिलाका लागि स्क्रानिङ गर्नका लागि दुई वटा क्याम्प सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सो कार्यका लागि रु एक लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । गर्भवती तथा बालबालिका पोषण प्रर्वद्धन तालीमका लागि रु एक लाख र किशोरकिशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यबारे जनचेतना फैलाउनका लागि तालीम आयोजना गर्न रु एक लाख ५० हजार व्यवस्था गरिएको छ ।
“नगरपालिकाका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यबारे जागरुक बनाइ स्वस्थ्य समाज निर्माणका लागि जनमुखी कार्यक्रम बनाइ लागू गरेका छौँ ” नगरप्रमुख हमालले भने ।